Munaasabad lagu xusayay tacadigii loo geestay Wariyaasha sanadanka sii dhamaanaya 2012ka oo Nairobi lagu qabtay. – Radio Daljir
Diseembar 10, 2012 8:37 b 0
Nairobi, Dec 10, Xarunta Nabadda iyo Saxaafada ee loo (SEPJO) ayaa Nairobi ku Xustay tacadiyaddii sanadkan dhamaanaya ee ?2012-ka loo geestay wariyaasha Soomaaliya , shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay Ururo caalami ah, Wariyayaal Soomaaliyeed iyo kwuo Ajaanib ah.
Ugu Horayn kulankaasi waxaa daah furay Xoghayaha guud ee xarunta Nabadda iyo Saxaafadda ee CEPJO Md Maxamed Xaaji Xasan Abuukar, Wuxuuna ka hadlay dhibaatooyinkii Wariyayaasha Soomaaliyeed loo geystey sanadkan soo dhamaanaya ee 2012.
Wuxuu sheegay in sanadkani uu taariikh madow ku sagoontinayo Warfidiyeenadda Soomaaliyeed, iyadoo dil toogasho ah loo geystey in kabadan 16 Wariye halka tiro intaas kabadan loo geystey tacadiyo ka dhan ah Xuquuda aadanaha.
Maxamed Gaarane Aadan oo ah Madaxa tababaradda ee ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ku midaysan yihiin ee ?NUSOJ, oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay in Warfidiyeenadda ku sugan gudaha Soomaaliya ay la kulmaan dhibaatooyinkii ugu xumaa ee abid Soomara Saxaafadda Soomaaliya.
Intaasi kadib waxaa hadalka isaga danbeeyey masuuliyiin ka tirsan CEPJO, Khabiiro dhanka saxaafada ah iyo xubno kale oo shirka kasoo qayb galay.
Tom Rhodes, oo u wakiilka hay’ada CPJ ee Afrikadda Bari ayaa sheegay in sanadkan 2012 ay suxufiyiinta Soomaaliya la kulmeen dhibaatooyinkii u daraa marka loo eego aduunka intiisa kale iyadoo wadanka Soomaaliya kaalinta 1’aad sanadkan fadhiyo tacadiyadda Suxufiyiinta.
Ugu danbayn munaasibadaasi ?ay CEPJO ?ku xustay tacadiyadii ?wariyaasha looguna magacdaray sanadkan 2012 sanadkii Gaduudnaa ( The Red Year) ayaa waxaa shahaadoyin lagu gudoonsiyay arday ay xaruunta CEPJO u so xirtay siminaar sedex maalmood ah soconayay kaasi oo loo qabtay 12 arday oo Nairobi ka barta saxaafada.